Diaspora any Alemana - Hambourg 29 Jiona
Tao anatin’ny fankalazana ny 59 taona niverenan’i Madagasikara tamin’ny fahaleovantena dia nisy ny Workshop nokarakarain’ny vondrona Malagasy-Germany niaraka tamin’ny Hetsika Malagasy Hamburg mitondra ny lohahevitra hoe “Diaspora matanjaka eo amin’ny sehatry ny asa”.
Navoaka tao anatin’ny dinidinika ireo sakana sy pai-kady ahatongava amin’izany toerana izany. Anisan’ny sakana handaliana fianarana ambony eny amin’ny Oniversite ny fananana ‘mpiantoka’ ara-bola. Nanotrona ny hetsika ny mpanolontsaina avy ao amin’ny Masoivoho Malagasy any Berlin. Nasaina manokana i Dr. Hanitra Rakotonirina, filoha mpamorina an’IKALA STEM, fikambanana mampiboroboro sy manamafy ny toeran’ny vehivavy Malagasy eo amin’ny taranja science, teknolojia, injerina ary matematika aty Madagasikara sy any ivelany. Marihina fa ireo sehatra ireo dia anisan’ireo efatra mitady olona indrindra eto Alemana. Tao aorinan’ny workshop dia nisy ny fampisehoana hira, dihy sy fitafy isam-paritra narahana fiaraha-misakafo sy mikorana.
Tsindrio eo amin' ny sary hahitanao sary hafa tamin'io fotoana io.